Uma ufuna ukudla okuthile ebesingakaze esheshayo futhi esihlwabusayo ukuthi kungenziwa ukukhonza etafuleni izivakashi, Newbie itiye, siphakamisa ukuthi sinake nati isihlabathi indandatho. Iresiphi ilula ukuze zokupheka, ungakwazi kalula ukuxhuma izingane ngisho encane.
Njengoba abathi wazibonela uwayehlalise, shortcrust khekhe - njalo kukho win win. Ilungiselela ngokushesha, izithako eziningi akudingekile, futhi, uma kunesidingo, ingagcinwa izinsuku ezimbalwa efrijini, okuyinto ekahle kakhulu zonke icala elifanayo izivakashi ezingalindelekile.
Shortbread indandatho nati, iresiphi zazo namuhla sinikeza kuwe, kuyinto confection elenziwe inhlama ezivamile futhi ne ukwengeza nuts oqoshiwe noma lonke. Ngokuvamile, amantongomane ezisetshenziselwa ukupheka, kodwa uma uthanda kungathatha yimuphi omunye nuts (alimondi, hazelnuts, walnuts, nokunye. D.). Kwabaningi, lo dish kubuyisa izinkumbulo ebuntwaneni, ngoba kule canteens kweSoviet futhi izitolo 90 shortbread indandatho nut bekuyingxenye yokufuna zesikole.
Ezimweni eziningi, isidlo enjalo has simise isiyingi ne umgodi ngaphakathi. Kodwa besifazane abaningi ukuzama, usebenzisa izindlela ezihlukene zokubiza kanye namadivayisi, bese wakha amakhukhi fancy.
Sinqume bonakalise ikhaya okumnandi futhi eqotho Nutty uswidi? Khona-ke ake uthole phansi ukulungiswa kanye ukubhaka okumnandi futhi elimnandi isihlabathi indandatho namantongomane.
200 amagremu ibhotela.
Ithisipuni elilodwa bayobhaka powder kuze esivivinyweni.
350 amagremu kafulawa kakolweni.
100-130 amagremu ushukela noma oluyimpuphu.
Amantongomane - 60-70 amagremu - I-ukufafaza.
Izikhupha - izingcezu ezimbili - i-Lubrication.
I GOST isihlabathi indandatho ezicela neminye imikhiqizo. Kwezinye ukwakhiwa ubisi samanje, abanye ochotshoziwe namantongomane kunezelwa ngqo inhlama, wesithathu kukhona ukhilimu noma yogurt.
Inqubo sokulungiselela ngokuvumelana GOST
Thatha umthamo indebe ye inhlama kwasakazekela kubantu bhotela, ushukela oluyimpuphu kanye baking powder. Kufanele kuqashelwe ukuthi kukhona ongakhetha ahlukahlukene indlela yokwenza shortbread inhlama ukuphi. Ukunikezwa Imvume Yokuthola Umuthi lo imajarini isetshenziswa ngokuvamile ngempela, kodwa ngoba izivakashi njengoba silungiselela manje isetshenziswa ngemva zonke ibhotela.
Manje ngokuphelele exubile. ikhefu enabileko Iqanda isisindo solim.
Omama abaningi abasemakhaya sieved ngaphambi kokwengeza ufulawa inhlama. Kodwa njengoba umthetho, singakwazi ukulindela ubukhazikhazi version imvubelo, futhi thina shortbread inhlama, ngakho uma ziyaqiniseka izinga kafulawa, ungakwazi zivundulula okwaso. Engeza ufulawa mass, zonke ukugxambukela ngokucophelela aze mass homogeneous isihlabathi.
Uxove inhlama kungaba kokubili nge spatula akhethekile izandla. Bakha ibhola of inhlama evala ngayo epulasitikini, wagqoka isigamu sehora in the esiqandisini.
Thatha out ball inhlama kusuka imbala futhi nge rolling pin ekwenziweni Pancake ukujiya kufanele kube amamilimitha angu hhayi ezingaphezu kweziyisikhombisa. Ngaphezu kwalokho, lo mvimbo ngeke isikhunta ekhethekile noma ngesimo umbuthano noma ithebula abavamile ipuleti usayizi ofanele. Ukusebenzisa ngendlela cut inhlama imibuthano. isikhunta amancane noma blade kufanele wenze imbobo ngaphakathi esiyingini.
ngokushesha Abanye besifazane abafuna agcobhoze emibuthanweni nut mass futhi uyithumele kubhakwa. Kodwa silungiselela zakudala shortbread indandatho nati, iresiphi GOST. Kube etholwe roundels wathumela ekuqaleni ngeke kuhhavini, futhi efrijini imizuzu eyishumi nanhlanu kuya amabili. Lapho emasongweni kuphole ngesikhathi osinikiwe, sithola kubo futhi aqale ubuciko.
Ukuze ziyadliwa imvuthu waba elihlangana kangcono test, oyi-agcotshisiwe ne amaqanda isikhuphasha. Ngemva kwalokho asikwazi ufafaze namantongomane. Egg isikhuphasha ayikwazi ukuxhuma kangcono kuphela nati shortcrust khekhe, kodwa futhi zangisiza ekwenzeni namakhekhe okukhanya mnandi kakhudlwana.
Isigaba sokugcina - osuke usushisa kakade 200 degree kuhhavini, ufisa ukuthumela izindandatho zethu imizuzu 10-15. Uma khekhe iyoba umbala enhle segolide, ungathola indandatho.
zokupheka Ngakho abaningi itiye esekelwe khekhe iDemo. Kodwa kuze kufike kuyasiza ukuze umzimba wethu? Ngenxa amantshu amaqanda namantongomane, shortbread inhlama buba umthombo wamandla. Ngo oyiyo kungatholwa iningi izakhi ishadi lesikhathi: yensimbi, zinc, copper, calcium, potassium, phosphorus. Futhi, lesi isidlo ecebile acid organic, B amavithamini kanye PP.
Imfihlo khekhe ephelele
Kunezindlela izimfihlo ezimbalwa ezilula ukuthi kuzovumela ngisho Omuny ongenalwazi ukwenza win win shortbread inhlama.
Lokushisa. Egumbini lapho ukupheka, kufanele kube cool. Zonke izithako for inhlama kumele kube emazingeni okushisa okuvamile.
Imajarini noma bhotela kumele kwanele, ngoba ngibonga kule inhlama uphendulela ingxenye crumbly. Angizisoli uwoyela. Lokhu dish ngeke akwazi ukwazi ukwenza okunama-kilojoule amancane. Inani enganele uwoyela ukulimaza Imiphumela kuphela.
Zama zonke izithako elixutshwe kahle. Ufulawa ne bhotela ngokuvamile kungcono ukuba uwuhlikihle izandla.
Ukuze kuzuzwe umphumela omuhle kubalulekile ukuhlonipha olinganise. Khumbula ukuthi inani ufulawa kufanele kube kabili inani imajarini.
Esikhundleni ushukela Kunconywa ukuba asebenzise powder. Kulokhu, inhlama Kuyophumela ethubeni, njengoba besho, encibilika emlonyeni.
Bagcine lesifanele ukulandelana amabhukhimakhi izithako.
Ungakhohlwa esiqandisini inhlama ukulungele futhi isivele bakha indandatho esiqandisini.
Ngo abandayo, ngisho okubi imikhiqizo osuke usushisa kakade kuhhavini ayikwazi axoshwe inhlama.
Uma ufuna yokudla zokupheka for itiye, Ngahamba, ngeshwa, ikheli elingalungile. khekhe iDemo - kadokotela ngenxa imajarini, ngisho ne ukwengeza okunamafutha nati imali ethe ushukela oluyimpuphu - akanawo nomphumela omuhle kwesisindo. eyikhulu amagremu le dessert iqukethe kilojoule mayelana 400-420.
Nakuba ezinengqondo yokudla confectionery kuyinto uswidi, hhayi nsuku zonke hhayi izingxenye ezinkulu, ungakwazi zithokozise. Njengoba ongoti kokudla uthi into esemqoka - ukwazi ngesilinganiso, bese sikwazi dlanini konke inhliziyo yakho ufisa. Kubandakanya isihlabathi indandatho nati, iresiphi esiye okuphakanyiswe kuwe namuhla.
Pizza Vegetarian nge imifino kanye amakhowe